अनुभवि डिफेन्डर बिना मैदान उत्रदै क्रोएसिया, टिक्ला त इंग्ल्याण्डसँग ? - Koshi Online
अनुभवि डिफेन्डर बिना मैदान उत्रदै क्रोएसिया, टिक्ला त इंग्ल्याण्डसँग ?
असार २७, मोरङ, रसियामा चलिरहेको विश्वकपमा आज हुने दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा क्रोएसिया र इंग्ल्याण्ड भिड्दैछन् । नेपाली समयअनुसार राति पौने १२ देखि सुरु हुने सो खेलको विजेताले फाइनलमा फ्रान्ससँग भिड्नुपर्ने छ ।
खेल मस्कोमा रहेको लुजिन्की रंगशालामा हुनेछ । इंग्ल्याण्डले समूह चरणमा ट्युनिसिया, पानामालाई हराएको थियो भने बेल्जियमसँग १–० ले हारेको थियो । अन्तिम १६ मा कोलम्बियासँग १–१ को बराबरीपछि टाइबे्रकरमा ४–३ ले विजयी भएको इंग्ल्याण्डले क्वाटरफाइनलमा स्वीडेनलाई २–० ले हराएको थियो ।
क्रोएसियाले समूह चरणमा नाइजेरिया, अर्जेन्टिना र आइसल्याण्डलाई हराएको थियो । अन्तिम १६ मा डेनमार्कसँग १–१ को बराबरीपछि टाइब्रेकरमा ३–२ ले विजयी भएको क्रोएसिया क्वाटरफाइनलमा पनि टाइब्रेकरमै विजयी भएको हो । क्वाटरफाइनलमा रसियासँग २–२ को बराबरीपछि टाइब्रेकरमा क्रोएसिया ४–३ ले विजयी भएको थियो ।
इंग्ल्याण्डविरुद्ध क्रोएसियाका डिफेन्डर सिम भरसाल्ज्को हुने छैनन् । घुँडाको चोटका कारण उनी मैदान बाहिर छन् । गोलकिपर ड्यानियल सुवासिक पनि पूर्ण रुपमा फिट छैनन् ।
इंग्ल्याण्ड टोलीमा भने २३ जना खेलाडी नै पूर्ण रुपमा फिट छन् । स्वीडेनसँगको खेलमा समस्यामा रहेका जेमी भार्डी र जोर्डन हेन्डर्सन क्रोएसियाविरुद्ध खेल्न तयार छन् ।
यसअघि इंग्ल्याण्ड र क्रोएसियाबीच यसअघि ७ पटक खेल भएको छ । जसमा इंग्ल्याण्डले चार खेल जितेको छ । क्रोएसियाले दुई खेल जितेको छ भने एक खेल बराबरी भएको छ । प्रमुख प्रतियोगितामा सन् २००४ को युरोकपमा भएको भेटमा इंग्ल्याण्डले क्रोएसियालाई ४–२ ले हराएको थियो ।